Manchester City Oo U Xadhko Xidhatay Henderson, Wilshere & Pogba iyo Nasri Oo Ka Tegaya
HomeEnglandManchester City Oo U Xadhko Xidhatay Henderson, Wilshere & Pogba iyo Nasri Oo Ka Tegaya
Xiddigaha khadka dhexe ee u dhashay England ee Jordan Henderson iyo Jack Wilshere ayaa si lama filaan ah ay magacyadoodu ugu soo baxeen liiska ciyaartooyada ay Manchester City dooneyso in ay iibsato xagaaga.
Manchester City oo haysata Premier League sannadkii hore ayaa dhibaatooyin badan la soo derseen, waxana kooxdaba laga waayey ciyaartooyo u dhashay wadanka ay kooxdaasi ka dhisan tahay ee England, kaliya waxa ka mid noqda kooxda koowaad goolhaye Joe Hart, inkasta oo mararka qaarkood Milner uu lagu daro. Sidaas daraadeed, Laacibka Liverpoor ee Henderson iyo Wilshere oo khadka dhexe ee Arsenal ah ayaa bartilmaameedka kooxda noqday, si loo dhalan-geddiyo kooxda, looguna soo daro ciyaartooyo dhalasho ahaan ka soo jeeda England.
City waxa kale oo ay xiisaynaysaa laacibka aan ku degenayn Liverpool ee ka tirsan xulka qaranka Ingiriiska ee Raheem Sterling.
Laacibiinta khadka dhexe ee Frank Lampard oo 36 jir ah iyo James Milner oo 29 jir ah ayaa la xaqiijiyey in ay Etihad Stadium ka tegi doonaan bisha June, taasina waxay kooxda ka faaruqinaysaa ciyaartooyada Ingiriiska ah.
Henderson, waa 24 jir ka ciyaara khadka dhexe, waa kabtanka labaad ee kooxda Liverpool, hase yeeshee waxa la xaqiijiyey in uu diiday in uu heshiiska u kordhiyo kooxdiisa, iyadoo uu qandaraaskiisana hal sano ka hadhsan tahay. Tani waxay keenaysaa in Manchester City ay ciyaartoygan ku bilowdo xodxodasho si aanu heshiiska ugu kordhinin Liverpool.
Wilshere oo ah 23 jir, heshiiska uu kula jiro Arsenal waxa ka hadhay laba sannadood, laakiin dhaawacyo daashaday iyo qalliino lagaga sameeyey jilibka lugta bidix ayaa hoos u dhigay rasmi ahaanshihiisa kooxda koowaad ee Arsenal, wnaxaana suurtogal ah in xidhiidhkii wanaagsanaa ee kala iibsiga ciyaartooyada ee u dhexeeyey Arsenal iyo City uu keeno in ay kala iibsadaan laacibkan.
Shanti sannadood ee u dambeeyey Manchester City waxay ka iibsatay Arsenal xiddigaha Samir Nasri, Bacary Sagna, Emmanuel Adebayor, Kolo Toure iyo Gael Clichy kuwaas oo ay ka bixisay lacag kor u dhaafaysa £80million.
Arsenal ayaa la sheegay in qiimaha ay ku iibin karto ciyaartoygeedan uu yahay £30million, taas oo City ay si degdeg ah ugu dhaqaaqi doonto haddii loo ogolaado.
City waxa kale oo ay dooneysaa in ay u isticmaasho laacibiinteeda Nasri iyo Edin Dzeko in ay qayb ka noqdaan heshiis lacag lagu daray oo ay kula soo wareegto laacibka khadka dhexe uga ciyaara Juventus ee Paul Pogba.
Pogba oo ay da’diisu tahay 22 jir, ayaa si fiican u yaqaana ciyaaraha wadanka Ingiriiska iyadoo uu hore ugu ciyaari jiray Manchester United ka hor intii aanu tegin Juventus.
Manchester City waxay u aragtaa Pogba in uu yahay beddelka Yaya Toure, waxaana lagu qiyaasayaa lacagta ay Juventus ku iibinayso £60million, waxaana ay City dooneysaa in Nasri, Dzeko iyo lacag ay isugu darto Juvuntus.
Cleveland Cavaliers vs OKC Thunder – Full Game Highlights | January 20, 2018 | 2017-18 NBA Season
Juventus Oo 10 Ciyaaryahan Ku Karbaashtay Lazio